Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulan hor dhac ah la qaatay Axmad Madoobe – Somali Top News
Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulan hor dhac ah la qaatay Axmad Madoobe
Hogaamiyaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi iyo wafdi uu hogaaminayo.
Maamulka Kismaayo oo wada jira iyo madaxweyne Madoobe aya awaxa sheegeen in uu ku faraxsan yahay imaatinka wafdigan oo waliba si gaar ah u matalaya Dowladaha xubnaha ka ah Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya.
Axmad Madoobe wuxuu sheegay oo kale in Dhismaha wadanka iyo howlaha soo noolaynta rajada ay masuul ka yihiin Aqalka sare iyo odayaasha waayo araga ah ee aan lagu halayn qof ama koox gaar ah oo aan marxalada wadanka wax badan kala socon iyo halka laga yimid.
Mudane Xaashi waxa uu rajaynaynayaa in Midnimada iyo nabadgalyada dalka oo dhan la gaarsiiyo maamulada kale si Soomaaliya oo dhan ay u gaarto oo wadan xasilan.
← Deg Deg: Qarax culus oo lala eegtay ciidan katirsan Militeriga Soomaaliya
Aas Qaran oo loo sameeyay saraakiil shalay lagu dilay Qarax Miino →
Muxuu salka ku hayaa Khilaafka Muna Key iyo Xukuumadda Soomaaliya?
Ciidamada Nabad Sugiida iyo hubkooda oo laga wareejiyay taliska Booliska